XIINXALA WALLEE GALAANAA GAAROMSAA-Sodaa Qawwee Hinqabnu- Caalaa Haahiluu Abaataa’tiin – Beekan Guluma Erena
XIINXALA WALLEE GALAANAA GAAROMSAA-Sodaa Qawwee Hinqabnu- Caalaa Haahiluu Abaataa’tiin	Beekan Erena
Poems June 15, 2016June 15, 2016
146SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
XIINXALA WALLEE GALAANAA GAAROMSAA-Sodaa Qawwee Hinqabnu- #‎OromooProtests‬
Xiinxala Gabaabduu wallee Galaana Gaaromsaa ” SODAA QAWWEE HIN QABU” jedhu irratti waan xiqqoo jechuun fedhe.
Atilleen yaa doloolloo, riqicha kajeeltekaa
raareef riqicha ijaarree , galaannni akkam haa tahuu?
atillee yaa keessummaa ol darbuu kajeeltekaa
Golaaf goolloon kan abbaati,
keeessummaan diinqa hin gahu
booddeebbaan shiran qabaa,
kan diree keessaa dhahuu
du’eetan bada malee,
keessummaan diina hin gahuu
du’a abbaa koo haa tahuu…
Walllee qeenxee Galaana Gaaromsaa ”SODAA QAWWEE HIN QABU” jedhu kan dhihoo kana baase kana utuu il-dhagni yookin suursagaleen hin hojjatamiiniif namni naaf ergee akkaan caqasaan ture. Amma immoo erga suursagaleen qindaa’ee gadhiifame waan hedduun hubachuuf yaale. Irra deebi’een caqase, quufurra daranuu araada natti tahe. Walleen dhihoo kana Keekiyyaa Badhaadhaa ‘Mammaraanne’ jedhus miira koo akkaan too’atee ture.
Sirbichi wantin miira koo fuudheef irraa caalatti dhama jechootaa fi kiloolummaasaati irrayyuu maallata,raaga,ilaalchaa fi dhugeeffata Oromoodhaa, mammaaksaa fi jechamoota dur duroo warri keenya egereef laallatan akkaan qiyyaafata godhate. dubbii dachaa fi qolaan dhaama, waan gadaan qabu hima, waan Gadaan ittiin damboobee fi moo’e alalaasa, waan Gadaan irraa dabeefi dadhabellee mammaaka. Galaanaan erga gara walleetti dhufee dhihoo tahullee walleewan isaa cuftinuu qalbii nama godaansu. ”LUBEE” sirba seenaa ture. Yeroo Master plan dubbii kaases,
”UTUU DACHEEN TUN GODAANTEE SILAA NI GODAANSITUU” kan jedhu tokkoon miira keenya hedduu akka too’aten amana.
Dubbiin kun iccituma, ODAAN guyyaan daraaruu,
Ormi gateettii sobaa, Gadaan Meelbaa sin nyaaruu
Biiflee roorroo hin sarminee, Raabaa fi Doorii dha qabuu,
Taankiif jeettidhaan dhuftus, dhaloonni Qubee kuni
sodaa Qawwee hin qabu…
Akkaa dhugeeffannnoo(raaga) fi Gadaa Gara TUULLAMAATTI, GADAAN MEELBAA FAROO YKN MILKII INJIFANNOO oromooti.
Namuu gara Tuullamaatti Gadaa Meelbaa kana keessa hawwii guddaan dambalai’aa jira. Gadaan Meelbaa erga seenee waggaa Jahaffaa irra jira. Gadaa Meelbaa, Gadaa Oromoon moo’atu jedhu. Wayyaaneenis kanuma barteeti kan irra utaalchifte harka micciirtee, uummanni garuu ammayyuu Gadaan kan Meelbaa tahuu beeka hawwiin taateesaas eeggachaa jira..
Ggalaanan sirba kan keesssatti, booree fi xiiqii kaaha, Gaabbiis hima,egereef immoo haaloo fi gadoo nama guduunfachiisa. Gootummaafi seexaa dhalootaa dhalootaf hima, Dhaloonni amma jiru maalif akka durssa kennaa jirullee deebisee nuun gaha.
Asuma keessa immoo safuu cabuu fi tuffii diinni Oromoof qabu,deebiseemmoo sodaa diinni Oromoof qabus hima.
Waanuma halleefuu walleen kuni wallee jala bultii Bilisummaa ti. Walabummaa yeedaleessa, bilisummaa asaasaa, FXG cimsa, garaa hin laafnuu, hardha badii balleessinee boru hin gaabbinuu, atis ergamaa diinaa, mee koottu gara dhiiigatti debi’i, Tuulluun namarratti jignaan, namni namarraa kaasaa, uummanni sitti jignaan, duutu awwaalcha hin qabduu, baddus barbaacha hin qabdu jedheen dhaammata wallee kanaan.
Deebisees immoo akka komeetti dhaamata.
nan dhufaa jedhees yoom hafee,
nan lolas jedhee yoom rafee
dheeratus karaan nan hambiftuu,
yoon rafes garaan na raffiftuu
diina qe’eerraa roorriftuu
akkamiin lammiitti calliftuu jedhaan Gooticha bahee falmaa jiruun.
Walleen kuni waan hedduu kaasa, jiruuf jireenyaa Oromoo, daangaa darbuu gabrummaa dhaa, murannoo sabaa, tokkummaan lakkii jedhee walfaana hiriiruu isaa, gootummaan isaa diina gara seentu dhabsiisee baraaxessuu isaa.
Ammoo karaa kamiinuu falli dhumaa diina buqqisuu dhuma jedha. kanaan ala falli akka hin jirres ni hima. Booreen nutti akka jirtuu fi haalli daranuu hammaataa akka deemuu fi yeroo kennnuun akka hin feesifnes ni hima. Gumaan maallaqaan utuun baane, kabaajaan kan dhufu dhiiga dhangala’e dhiigan yoo deebisnen qofa tahuu qaba jedha.
Araarrii waaraa Bilisummaa qofa akka tahes jala mureet hima. Ammas soogoo fi sorgoon isaa Tokummaan bakkayyuu yoon hin taane qaamni tokkichi gatii hin qabu, jaarmiyaa tokkoon waliin diinaratti akka duuluu qabnu ni hima.
Ulaa hin banin,
bobaa jalaan seenti Gadheenii
dallaa jabeessii ,
abbaa dhumaan tolti qe’eenii
ijaarsa kee tolchi jedhiinii
abbaa dhumaan tolti jedhiinii…
gumaas hin nyaannu Maallaqanii
ajeessnet baafanna dhiiganii …
sodaa qawwee hin qabnu jedhiini…
Nu callisnaan arba ciisee seetee
nu dammaqnaan boolla meeqa buute
akka dhukaafteef silaa nu dhumneerraa,
gamtaan lollee anumaaf cimneerraa.
Darbees seenaa nutti asaasee darbe Galoon. Kunis gootummaan dhaloota kanaa kan Jeneraal Taaddasaa Birruu qabaachuu keenya fi Iccitiis taanan seenaa abbbootii keenyaa irraa waan barre qabna jedha. kunis fakkii Haajii Adam Saaddoo kaasaa.Egaa ”Fardi ni dhaqqabsiisa malee, hin waraanu jedha. akka ogeessa aartii fi weellisaatti maaltu Galaanatti haferee?
Hedduu dubbii sinitti hin dheeressu,isan ani jedhe Caalaa Galoon kuulee kkobee sagalee kiloolee saniin nuun gaheera waan taheef caqasuutu irra wayyooma.
Horaa bulaa deebana!
Galoo umrii dheeradhu qaxalee koo!
Walleesaa Argachuuf As Tuqaa
Caalaa Haahiluu Gaaromsaa About Latest Posts Beekan ErenaTeaching, Writing and editing at Books Latest posts by Beekan Erena (see all)	DIINQA OROMOO: Kutaa 1ffaa-Obbo Xaahaa Roobaafi Beekan Gulummaa Irranaa, Caamsaa 26, 2017 - May 27, 2017	TAAJJABBIIN Kutaa 100 Gahe ammaaf dhaabateera-Ramadan Kariim yaa Uummata Musliimaa - May 27, 2017	BEEKAN GULUMMAA IRRANAAFI CALANQOO SHOW’ Haala Yeroo tokko tokkorratti, Caamsaa, 2017 - May 24, 2017	Kana Tamsaasi:TweetEmailPrint
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa146SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← DHALLI OROMOO QABSOO WAYYAANEETTI OF GALMEESSUU QABAA? -Xiinxala Dargaggoo Saphaloo Kadiir | Abdulbasit’n
IMAAMMATA DHOKSAA WAYYAANEEFI WARAANA ITOOPHIYAA–Camadaa Hundee’tiin →